इज्जतवाद विपरीत सेक्ससँग सम्बन्ध निर्माण गर्न पहिलो चरण हो। इशारा गर्ने क्षमता भन्दा बढी निर्भर छ - चाहे सम्बन्ध जारी रहनेछ वा छिटो "No।" मा जानुहोस्। निश्चयले धेरैलाई ध्यान दिएका छन् कि केही निष्पक्ष सेक्सले प्रशंसकहरूको भीडले घेरिएको छ र अन्य - कुनै कम आकर्षक र आकर्षक, विपरीत सेक्स मात्र नोटिस गर्दैन। मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन् कि पछिको मुख्य समस्या इशारा गर्न असक्षम छ। छेउमा एक महिलाले अन्तरक्रियाकर्तासँग कुराकानी गर्न महिलालाई आफ्नो गरिमालाई जोड दिन्छ र निर्धारण गर्दछ कि उनीहरूले हाम्रो "महिला चालहरू" कसरी प्रतिक्रिया गर्छ? छेड़छाडका नियमहरूसँग सख्त सीमाहरू छैनन्, तिनीहरू केवल महिलाहरूलाई मदत गर्ने महिलाहरूलाई प्रकट गर्न र उनको आकर्षण देखाउनका लागि मात्र सिफारिशहरू हुन्। त्यसो भए, छेड़छाडका नियमहरू:
पहिलो चरण लिनुहोस्। पहिले नै गएका पुरुषहरू पहिले पुरुषमा रुचि देखाउँदा पहिलो पटक खराब स्वादको चिन्ह मानिन्छ। आधुनिक पुरुषहरू महिलाहरूलाई आकर्षित हुन्छन् जो पहिले कुराकानी सुरु गर्न डराउँदैनन्।
जोखिम लिनुहोस्। पुरुषहरु मध्ये, अनैतिक व्यक्तिहरु लाई अक्सर भेटिन्छ। सायद, तपाईले मनपर्ने जवान मानिस पनि रुचि राख्नुहुन्छ, तर दृष्टिकोणमा हिचकिन्छ। एक महिला मा साहस र उदार आराम को उसलाई एक विशेष आकर्षण दे।
उपस्थितिमा आँखा राख्नुहोस्। पहिलो चरण लिँदा वा एक मितिमा जाँदा, तपाइँ निश्चित हुनुपर्दछ कि तपाईं राम्रो देख्नुहुन्छ। कपाल, मैनीक्योर, कपडा, सामान र सबै चीजहरू - सबै सानो चीजहरू खातामा लिनु आवश्यक छ। यो ज्ञात छ कि पहिलो छाप केवल केहि मिनेट भित्र गठन गरिएको छ, त्यसैले यो धेरै शुरुवात देखि खराब गर्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छैन।
इत्र प्रयोग गर्नुहोस्। एक जना पुरुषले यो कसरी बुझ्न सक्दछन् महिलाको गन्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यद्यपि, यो केवल इत्रको बारेमा होइन। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उहाँ "तपाईंको" - फिट हो, संचारको उपस्थिति र शैली पूरै।
संचारमा सजिलो हुनुहोस्। पहिलो मिति मा आवश्यक दार्शनिक संधि, राजनीति र अन्य विषयहरु को विचार को लागी जटिल छ। एक रोचक व्यक्ति, मजाकलाई प्रभाव पार्न को लागी सहज हुन र विभिन्न सारका विषयहरू समर्थन गर्नुहोस्।
सक्रिय हुनुहोस्। यदि तपाइँले तपाइँको अन्तरवार्ता जाम छ भनेर देख्नुहुन्छ भने, कुराकानी गर्न र तिनलाई चासो दिन प्रयास गर्नुहोस्। कुराकानीमा, त्यहाँ लामो र अजीब पज नहुन हुँदैन। यदि एक मान्छेसँग केहि भन्न को लागी भने, त्यसपछि उहाँ सुन्नुहोला - यस अवस्थामा तपाई एक बुद्धिमान महिलाको छाप बनाउनुहुनेछ।
तपाईंको आँखामा हेर्नुहोस्। आँखाको सम्पर्कले तपाईंको अन्तर्वार्तालाई तपाईंको ईमानदारी देखाउने मौका दिन्छ। तर यहाँ यो महत्त्वपूर्ण छ कि मानिसको आँखा खाँदैन - यो उत्कृष्ट छ। रहस्यमय हुनुहोस्।
प्रशंसा बोल्नुहोस्। पुरुषहरूले गर्भमा प्रेम गर्दछन् महिलाहरु भन्दा कम। तर पार्टनरमा राम्रो छाप बनाउन, तपाईंलाई मूल हुनु आवश्यक छ। ब्यानल वाक्यांशहरूले तपाईंको अन्तरक्रियाकर्तालाई डरलाग्दो हुनेछ। प्रशंसा प्रस्तुत गर्दै, निष्कपट हुनुहोस् र भावना संग बोल्नुहोस्।
आफ्नो साझेदार छुनुहोस्। लाइट र सजिलो टचहरू संवाददाताहरूको बीच गोपनीय र अधिक आन्तरिक वातावरणको निर्माणमा योगदान गर्दछ। अयोग्य मानिसको हात वा कंधेलाई छुनुहोस्, उदाहरणका लागि, उहाँसँग सहमत हुनुहोस्।
आफ्नो कोक्रीट देखाउनुहोस्। कोकेट्री महिलाहरु को छेड़छाड़ को नींव मा एक छ। रहस्यमय रूप, सुरुचिपूर्ण संगठन, आंकडाको सम्मानलाई जोड दिए - यी सबै महिलाहरु को चाल पुरुषहरु को लागि उत्कृष्ट हो। तर यो कुरामा यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो अतिव्यापी छैन - एकदमै छेपारो महिला र बलियो यौन सम्बन्धका सदस्यहरूको बीचमा सहानुभूति भन्दा पनि दुश्मन हुन्छ।
मुस्कान। मुस्कानले कुनैपनि अवस्थामा अन्तरक्रियाकर्ताको स्थानको कारण बनाउँछ।
डेटिङको लागि शीर्ष 10 स्थानहरू
कडा सुँगुर पैर - के गर्ने?
सलाद «लेडीको शिम» - नुस्खा
स्ट्राबेरी तरल - सबैभन्दा स्वादिष्ट घर बनाइएको अल्कोहल व्यंजनहरू
घरको लागि Lomterezka - कुनलाई एक भान्सा सहायकको रूपमा छनौट गर्ने?
स्विडिश आंतरिक डिजाइन
रोयल पैलेस (ब्रसेल्स)
Olga Skazkina - कपडे
चिफिया 2013 बाट ड्रेसहरू
ग्लेज - नुस्खा
अनुहारको लागि गुलाबी तेल
Aubergines, काली र टमाटरबाट गर्म सलाद
भान्साको लागि अलमारी
घुटनेमा एक रसिलो स्कर्टको साथ ड्रेस गर्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि स्मार्ट घडीहरू
किन उपहारको सपना?
खट्टा चेरी कम्पास - सर्दीको लागि र हरेक दिनको लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट पेय व्यञ्जनहरू
कुन देशमा पेन्सिल स्कर्ट आविष्कार गरिएको छ?